Imfazwe yokuSukumba izandla kunye neNkathazo yokuThatshazwa
Inkqubo ye-Antiseptic kunye nokusetyenziswa kwe-chemical antiseptics yindlela yophuhliso lwangoku kwimbali yokuhlinzwa kunye neyeza unyango. Oku akumangalisi ukususela ekufumaneni kweentsholongwane kunye noPasteur ubungqina bokuba bangabangela izifo ezingazange zenzeke kude kube ngumxheshana wokugqibela wekhulu le-19.
Ignaz Semmelweis - Geza izandla
Isigungqungquthela saseHungary Ignaz Philipp Semmelweis wazalelwa ngoJulayi 1, 1818 waza wafa ngo-Agasti 13, 1865.
Ngoxa wayesebenza kwisebe lokubeletha laseVienna General Hospital ngowe-1846, wayekhathazekile ngesantya se-puerperal fever (ebizwa ngokuba ngumkhuhlane wabantwana) phakathi kwabafazi abazalela apho. Oku kwakusoloko kukho imeko ebulalayo.
Isantya se- puerperal fever saziphindwe kathathu kwiwadi ebenobungcali bendoda kunye nabafundi bezonyango kwaye bancitshisi kwiwadi abaxhaswa ngababeleki. Kutheni kufanelekile oku? Wazama ukuphelisa amathuba amaninzi, ukusuka kwindawo yokuzala ukuphelisa ukuhamba-ngumbingeleli emva kokufa kwezigulane. Oku kwakungekho mpembelelo.
Ngo-1847, umhlobo osondeleyo kaDkt. Ignaz Semmelweis, uJakob Kolletschka, wanqumla umnwe ngelixa eqhuba i-autopsy. Kolletschka kungekudala wafa ngeempawu ezinjengezo ze-puerperal fever. Oku kwabangela ukuba uSommelwiss aqaphele ukuba oogqirha nabafundi bezonyango bavame ukwenza i-autopsies, ngelixa ababelethisi abazange. Wayechaza ukuba iindidi ezivela kwii-cadavers zinoxanduva lokudlulisa eso sifo.
Waqalisa ukuhlamba izandla kunye nezixhobo kunye nesepha kunye ne- chlorine . Ngeli xesha, ubukho beentsholongwane azizange ziziwe okanye zamukelwe. Imfundiso ye-miasma yesifo yayisisigxina, kwaye i-chlorine yayiza kususa nayiphi na imiphunga embi. Iimeko ze-puerperal fever zahlahlaka kakhulu xa oogqirha besenziwa ukuba bahlambe emva kokuba benze i-autopsy.
Wayekwazisa esidlangalaleni malunga neziphumo zakhe ngo-1850. Kodwa ukujonga kwakhe kunye neziphumo azizange zihambelane nentsholongwane ephakamileyo yokuba izifo zibangelwa ukungalingani kwamanzi okanye ukusabalala ngama-miasmas. Kwakhona kwakuyimisebenzi ecasulayo ebeka isityholo ekusasazeni izifo kubagqirha ngokwabo. U-Semmelweis wayichitha iminyaka eyi-14 ephuhlisa kwaye ekhuthaza imibono yakhe, kuquka ukupapasha incwadi ehlaziywe kakubi ngowe-1861. Ngo-1865, wahlulwa yintlungu kwaye wazinikela ekukhoselweni kwendawo yokukhosela apho wafa ngokukhawuleza ngenxa yetyhefu yegazi.
Kuphela emva kokufa kukaDkt. Semmelweis kwakuyi-germ'sory theory of illness developed, kwaye ngoku uyaziwa njengenguvulindlela we-antiseptic nkqubo kunye nokukhusela izifo ze-nosocomial.
UJoseph Lister: I-Antiseptic Principle
Ngaphakathi kwekhulu leshumi elinesithoba, ukusuleleka kwe-post-operative sepsis kwenzelwa ukufa malunga nesiqingatha sezigulane ezenziwa ngophando olukhulu. Ingxelo eqhelekileyo yabagqirha kwakuyi: ukusebenza ngokuphumelelayo kodwa isiguli safa.
UJoseph Lister wayeqinisekile ngokubaluleka kokucoceka ngokucokisekileyo kunye nokusetyenziswa kwezidyuliyo kwigumbi lokuqhuba; kwaye xa, ngokusebenzisa uphando lukaPasteur, waqonda ukuba ukubunjwa kwepus kwakungenxa yeebhaktheriya, waqhubeka nokuphuhlisa indlela yakhe yokucoca.
Ifa leSmmelweis kunye noLister
Ukuhlambulula izandla phakathi kwezigulane ngoku kuyaqatshelwa njengendlela efanelekileyo yokukhusela ukusabalalisa izifo kwizicwangciso zonyango lwempilo. Kuko kunzima ukuthotyelwa ngokupheleleyo koogqirha, abahlengikazi kunye namanye amalungu eqela lezempilo. Ukusebenzisa iindlela ezingenabungozi kunye nezixhobo ezinobuntshontsho ekutyathweni kuye kwaba nempumelelo engcono.
Inkcazo yenkxalabo kunye nemizekelo
Impembelelo yaseNdiya yaseMelika kwiSiseko saseMelika
Uhlalutyo lomntu: UDkt. Vivian ephethe 'Wit'